psp ကို ဖွင့်ပြီးနောက်တဲ့အခါ setting menu ကို ဘယ်ဘက်အဆုံးအထိ ဆွဲသွားလိုက်ပါ
အဲဒီကိုရောက်တဲအခါ အောက်ဘက်ထဲက network setting ကို " X " ခလုတ်နှိပ်ပြီး ရွေးလိုက်ပါ
ပြီးတဲ့အခါ Infastructure Mode ကို " X " ထပ်နှိပ်ပေးပါ
New Connection ကိုရွေးပြီးတဲ့နောက် " X " ကို ဆက်နှိပ်လိုက်ပါ
အဲဒီအခါမှာ connection ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်( ၀ိုင်ယာလက် ကော်နက်ရှင်ဖြစ်ရပါမယ်) ပြီးတဲ့အခါ "Scan" ကိုရွေးပြီး ဘယ်ဘက်သွားတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်တဲ့နောက် PsP က သူ့ အနီးအနားမှာရှိနေတဲ့ ၀ိုင်ယာလက် ကော်နက်ရှင်တွေကို စတင်ရှာဖွေမှာဖြစ်ပါတယ်။
PSP အနေနဲ့ ကော်နက်ရှင်တွေရှိမရှိ စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက် ရရှိလာတဲ့ ကော်နက်ရှင်တွေကို ပြသပေးမှာ့ဖြစ်ပါတယ်။ တခုထက်ပိုနေတဲ့အခါ အဲဒီထဲက ကိုနှစ်သက်တဲ့ ကော်နက်ရှင်ကိုရွေးရမှာပါ။ တကယ်လို့ ရရှိလာတဲ့ကော်နက်ရှင်က Password ခံထားရင်တော့သင့်အနေဲ့ အဲဒါကိုသိဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တခုက ရရှိနေတဲ့ ကော်နက်ရှင်က အားကောင်းနေဖို့လိုပါတယ်။
တကယ်တမ်းကတော့ သင့်ကိုယ်ပိုင် ၊ ဒါမှမဟုတ် အသိတယောက်ယောက်၊ နောက်တမျိုးက ပတ်စဝေါ့ ခံမထားတဲ့ wifi connection ကိုရထားတာပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါမှ အလွယ်တကူချိတ်ဆက်လို့ ရမှာပါ။ ဒါတွေ ကိုပြင်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ " X " ကိုဆက်ပြီး နှိပ်ရပါမယ်။
ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ PSP ကနေ ချိတ်ဆက်မိကြောင်း ပြလာတဲ့အခါ ဘယ်ဘက်ခလုတ်ကို နှိပ်ထားရင်း setting ကို save ရပါမယ်။
အခုတခါကတော့ ရလာတဲ့ connection ကောင်းမကောင်းကို စစ်ဆေးရပါမယ်။ တကယ်လို့ ပြန်ပြုတ်သွား ရင် နောက်တခါပြန်ပြီး ချိတ်ဆက်ပေးရပါမယ်။
Connection ကကောင်းကောင်းချိတ်ဆက်လို့ရသွားတဲ့ အခါမှာတော့ menu ကို သွားပြီး ဘယ်ဘက် ခလုတ် အဆုံးအထိဆွဲပြီး " Network " အဲဒီရောက်ရင် အောက်ကို ဆင်းပြီး internet browser ကို " X " နှိပ်ပြီး ရွေးချယ်ပေးပါ။
Browser ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ လိပ်စာရိုက်တဲ့ လေးထောင့်နေရာသေးသေးလေးထဲမှာ ကိုသွားလိုတဲ့ လိပ်စာကို ရိုက်ထဲ့ပါ။ ဒါဆို သင့်အနေနဲ့ PSP ကို အသုံးပြုပြီး internet ကို အသုံး ပြုနေနိုင်ပါပြီ။
တခုသတိထားရမှာက PSP ကိုအသုံးပြုပြီး ချက်တင် ၀င်ဖို့မသင့်တော်ပါဘူး။ တကယ်လို့ သုံးခဲ့ရင်တော့ ခလုတ်တွေဟာ မကြာခင်မှာဘဲ ပျက်ဆီးကုန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Labels: digital device games psp
Oh yes, I think more or less the same with PDA. Yes i normally use at airports after topping up credit for wifi access.
thanks for sharing. I did not know before PSP has got wifi asscess as i dont have one.
ဂေါက်ရေ ဒေါ့အိုအာဂျီနဲ့ ဘလော့တွေလဲဖွင့်မရဘူးဆို နင်ကတော့ ပို့စ်တွေတင်ထားပါလားဟ
လာဖတ်သွားတယ် နားတော့လည်ဘူး အဟိဟိ(နာက ပိန်းတာပါအေ) :P